01 / 04 / 2020 02 / 04 / 2020 ဂရေဟမ် 1112 Views စာ0မှတ်ချက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Lego, ဥပဒေ, LEGOLAND နယူးယောက်အပန်းဖြေစခန်း
LEGOLAND နယူးယောက်အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိနှောင့်နှေးမည်ဟု Merlin ဖျော်ဖြေမှုများကကြေငြာခဲ့သည်
ဒီဇူလိုင်လဖွင့်ဖို့ LegoLAND New York Resort ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေနှင့်သိသာသောကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ယူအက်စ်အေ၏နောက်ထပ် LEGOLAND ဆောင်ပုဒ်ကိုလာမည့်နှစ်အထိနှောင့်နှေးခဲ့သည်။
coronavirus ကူးစက်မှုကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် CDC နှင့်ပြည်နယ်နှင့်ဒေသန္တရအစိုးရများ၏ပြောင်းလဲနေသောကန့်သတ်ချက်များနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် LEGOLAND New York Resort ကို ၂၀၂၁ အထိနှောင့်နှေးစေသည်။
ဤရွေ့ကားပြောင်းရွှေ့နေရာများပိတ်သိမ်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖြစ်ရပ်များ၏ရွှေ့ဆိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤမကြုံစဖူးနှင့်စိန်ခေါ်မှုရှိသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ guests ည့်သည်များ၏ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုထက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးပါ။
အကယ်၍ သင်သည်နှစ်စဉ်လက်မှတ်သို့မဟုတ်တစ်ရက်လက်မှတ်ဝယ်ယူပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်တင်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါလင့်ခ်များထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] အသံပမာဏကြီးမားသောကြောင့်တုန့်ပြန်မှုများနှောင့်နှေးနိုင်သည်။ သင်၏စိတ်ရှည်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်။
လက်မှတ်သို့မဟုတ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသောမည်သူမဆိုလာရောက်လည်ပတ်သင့်သည် ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်တရားဝင် LEGOLAND နယူးယောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
အခြားအမေရိကန်အခြေစိုက် LEGOLAND ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ သည်အထိပိတ်ထားကြသည် အနည်းဆုံးmidပြီလလယ်.
← Lego Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြများ round-up
Lego Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြများ - ပရိတ်သတ်တွေကဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ် →